Maalinta: 22-ka July, 2017
Apaydin Ka qaybqaatay Ololaha Koowaad ee Tareenka BTK
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, 19 Arbacadii July, oo ay weheliso Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan, tareenka Kars-Tbilisi-Baku, [More ...]
Hadi Akmugan, xubin ka tirsan Golaha CHP IMM, wuxuu khudbadiisa ku sheegay Warbixinta Xisaabaadka Maaliyadeed ee IETT ee 2016 in IETT ay ku wajahan tahay maalgashiga caasumada hoose oo wuxuu yiri, "Tani waa bas bas yar, metrobus ka yar iyo [More ...]
Laba taraam ayaa ku dhacay Samsunda
Degmadda Atakum ee Samsun, taraafikada taraafikada ee gobolka Turkis ayaa ku dhuftay. Shixnadda 2 ayaa saaka ka dhacday degmada Turkiş ee degmada Cumhuriyet ee degmada Atakum ee Samsun. Tareenka oo ay saaran yihiin rakaab [More ...]
Magacyada saldhigga tareenka waxaa lagu sii deyn doonaa OMU
Xoghayaha Guud ee Dawlada Hoose ee Magaaladda Mustafa Yurt, Mustafa Yurt, Jaamacadda Ondokuz Mayis ayaa noqon doonta tirada saldhigyada iyo magacyada nidaamka tareenka fudud, ayuu yidhi. Xoghayaha Guud ee Dawladda Hoose ee Magaalada metelan Mustafa Yurt, Gobolka [More ...]
Shil tareen oo Pamukova ah oo ka dhacay shilalka 13 ayaa soo maray, dhibaatooyin isma bedelin
Rugta injineerinka farsamada Pamukova shilka tareenka 13. Wuxuu tilmaamay in dhibaatooyinka wadooyinka tareenka ay kusii socdaan sanad guurada. Madaxweynaha Rugta injineerinka farsamada Ali Ekber Çakar, Pamukova tareenka shilka ah ee 13. Xusuusnow in dhibaatooyinku weli ku jiraan sannadguurada tareenka tareenka [More ...]
Soo saarista xalalka korantada ee gaadiidka dadweynaha BozankayaMiisaaniyadda loo qoondeeyay R&D sanadkii 5 ee ugu dambeysay waxay gaartay 70 milyan TL. Natiijooyinka daraasadaha R&D, waxaa lagu dhawaaqay in mashruuca 19 ee mashruuca 10 uu hadda shaqeynayo. Jiil cusub [More ...]
Maanta taariikhda: 22 July 1920 Taliyaha Galbeedka Galbeedka Cali Fuat Pasha, oo tababar ...
Maanta Taariikhda 22 Luulyo 1920 Taliyaha Jabhadda Galbeedka Cali Fuat Pasha, oo hoos imaada amarrada saldhigyada tareenka, ayaa doonayay inaysan faragelin kuwa aan aqoon shaqada hillaaca, saraakiisha Masiixiyiinta ah waxay rabeen in loola dhaqmo si wanaagsan. Umadduna waxay iyaga uga ballan qaaday arrintaas [More ...]